<° Gamers: Linux တွင်ဇာတိငလျင်လှုပ်သည် Linux မှ
သူတို့ဟာ Link ပါ | | အားကစားပြိုင်ပွဲ
ငလျင် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုဂန္တ ၀ င်ဂန္ထ ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ Id Software များထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားဒဏ္sာရီများဖန်တီးသူ Doom o wofstein ရဲတိုက်မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်း၏အင်ဂျင်အချို့ကိုဖြန့်ချိသည့်အပြင် Doom 3.
ဒီဆောင်းပါးမှာပထမကစားနည်းကိုဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးပါလိမ့်မယ် ငလျင် ဇာတိ၌တည်၏ Linux ကို.
ဒီဟာကဂိမ်းအင်ဂျင်နဲ့မူရင်းဖိုင်တွေ (နှစ်ခု) လိုအပ်တယ်။အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်အရင်စမ်းကြည့်လိုပါက Shareware ဗားရှင်းကိုရှာနိုင်သည်)
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်အင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ် အမှောင်ထုဂရပ်ဖစ်ကိုတိုးတက်စေသည့်မူရင်းမှတိုးတက်လာသောအင်ဂျင်တစ်ခု၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဂရပ်ဖစ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအထုပ်တစ်ခုပင်ရှိသည်။
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ distro ၏ repositories တွင်ရှာဖွေနိုင်သည်။Ubuntu ကို ၎င်း၏ repositories ကိုအတွက်အထုပ်ရှိပြီး မုတ် ကျနော်တို့ကနေလုပ်နိုင်ပါတယ် AUR) သိုမဟုတ် package ကို source code ဖြင့်ကူးယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
အင်ဂျင်တပ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်များ၏ဖိုင်များသာပျောက်နေသည် ငလျင် သရုပ်ပြကိုဝယ်ယူရန် (သို့) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်မူရင်း ဒီမှာ။ ShareWare နှင့်အတူကျွန်ုပ်ယခင်ကပြောခဲ့သကဲ့သို့အခမဲ့ရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်သွယ်၍ မရပါ ငလျင် တရားဝင်အခမဲ့ဖြန့်ဝေသည်မဟုတ် ဂိမ်းတစ်ခုပြီးတာနဲ့ folder ထဲမှအကြောင်းအရာအားလုံးကို folder ထဲကို id1 သို့ကူးထည့်လိုက်သည်။အကယ်၍ ၎င်းမရှိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်လမ်းညွှန်အတွင်း၌ဖန်တီးသည် ငလျင်) မှ / usr / ဝေမျှ / ငလျင်နှင့် execute မှောင်မိုက်နေရာများ (သို့မဟုတ်အထုပ်ကိုသုံးလျှင်သို့မဟုတ် darkplaces-sdl AUR) ယခုကြှနျုပျတို့ကစားနိုင်ပါတယ် ငလျင်.
မှတ်ချက်ဖြေ။ ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနက်ရောင် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုရရှိလျှင်၎င်းသည်ဂိမ်းကိုရှာ။ မတွေ့ပါကသို့မဟုတ်အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုလျှင်အောက်ပါ command သည်လုံလောက်လိမ့်မည် (အဆုံးမှာ id1 မထည့်ဘဲ):
သရုပ်ပြကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူနိုင်သည် (သို့) သင်၏ဂိမ်းမှ ၀ ယ်နိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
နောက်ဆုံးမှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာကိုအကြောင်းအရာများ၊ mods များစသည်တို့နှင့်ပြည့်စုံစွာရေးသားရန်အကြံပြုပါသည် ငလျင်: ငလျင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » <° Gamers: Linux တွင်ဇာတိငလျင်လှုပ်သည်
ဘယ်အချိန်မှာ Neverwinter ည?
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန် ပို၍ ပင်ပန်းပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါမည်။
မှတ်ချက်ပြုသင့်သည်မှာ Linux တွင်ကစားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော ID Software ဂိမ်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်
ငါ hahaha ထားရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာအချို့ကိုရှာဖွေနေသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ငလျင်လှုပ်လျှင်ဒုတိယအဆင့်သည်အတူတူပင်ဖြစ်မည်။
ဒါဟာ ^^ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသောသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Windows ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ !!!
အကယ်၍ ¬.¬ကျွန်ုပ်သည် betatester ဖြစ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ် virtualize ပြုလုပ်သော linux VM များ၊ တွန့်သွားပြီးဥပမာအားဖြင့် crtl + alt + F1 ကိုနှိပ်လျှင် distro တစ်ခုအားသင်အသက်သွင်းပေးသည်။ သင့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာရှိပါသလား။ ဒါကကျွန်တော့်ကို XDDDD ပြောဖို့အများကြီးမကူညီဘူး။
ဟားဟား .. မင်းယူလိုက်တာ .. Catch is Don Perseo hahaha ..
ငါ Quake ငါထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာငါ Ms-Dos မှာကစားခဲ့တယ်၊ haha-game ကောင်းတယ်။ ID Software ကရိုးသားတယ်။ Linux မှာကစားဖို့ရွေးစရာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ အခုငါ Doom3ကိုအပြီးသတ်မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
ငါက fps ဂိမ်းကိုမကြည့်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီအခက်အခဲကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံခဲ့ရတယ်။
ကောင်းပါတယ် !!! ကောင်းတာက Linux မှာလည်းငါတို့ကိုဂိမ်းကစားဖို့နေရာပေးတာ။ ဤသို့သောပို့စ်များကိုအခါအားလျော်စွာပေါ်လာပါကကောင်းလိမ့်မည်။ desdelinux.net မှာရှိတဲ့“ Linux အတွက်ဂိမ်းများ” ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတောင်မပြောချင်ဘူး၊ ဒါကအံ့ wonder စရာပါ
ရွှင်လန်း! ငါ <° Linux ကိုချစ်
ထိုထက်ပိုသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ nano ရောငါပါဆောင်းပါးနှစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရက်စွဲမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်းစုံတွဲတစ်တွဲကိုအပြီးသတ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် - p)
မျက်လုံး! ၎င်းသည် display settings ကို 640 x 480 သို့ပြောင်းသည်။ ထို့နောက်သင်သည်၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ လက်တော့ပ်ပေါ်မှာကျွန်တော့်အဖြစ်ဆိုးကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဂိမ်းကိုငါပိတ်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာပြင်ကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်။
setting နှင့် voila ရှိအတိုင်းအတာများကိုသာပြောင်းပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် 800 × 600 ၌ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုပိတ်ပြီးနောက်ပုံမှန် resolution သို့ပြန်သွားသည်။
Debian အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလက်စွဲကို download လုပ်ပါ